theZOMI: [MoemakaDaily] 18th April - MoeMaKa Daily
[MoemakaDaily] 18th April - MoeMaKa Daily
နိုင်ငံတကာသာဂိ၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၃
ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ ဘော်စတွန်မြို့၊ Patriot နေ့အထိမ်းအမှတ် မာရသွန်ပြေးပွဲမှာ အကြမ်းဖက်သူတွေက ဗုံးထောင်လို့ လူ ၃ ဦး သေပြီး လူ ၁၇၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ လူ ၁၂ ဦး ခန့်ဟာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပါတယ်။ လူအချို့ဟာ သူတို့ ခြေတွေ လက်တွေ ဖြတ်ပစ်ရတဲ့အထိ ထိခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အကြမ်းဖက်သမားက ဟင်းချက်တဲ့ ပေါင်းအ်ိုးထဲမှာ သံတွေ၊ ဘောစိတွေ၊ ယမ်းတွေထည့်ပြီး လက်လုပ်ဗုံးနဲ့ အဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်အမှုကို ပြည်နယ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အထိ အင်အားကုန်၊ အာဏာကုန်သုံးပြီး ဖော်ထုတ် စုံစမ်းလျက်ရှိပါတယ်။
အဲသည်အဖြစ်အပျက်ပြီး ဧပြီလ ၁၇ မှာ အထက်လွှတ်တော်မှာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို အမတ်တွေက ၅၄ မဲ ၄၆ မဲနဲ့ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာ ရာဇ၀တ်မှုနောက်ကြောင်း စိစစ်ခြင်း မရှိဘဲ လက်နက်တွေ ကိုင်ဆောင်ခွင့် ၀ယ်ယူခွင့်တွေ ပေးထားတာတွေကို ကန့်သတ်ဖို့၊ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်နေတာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ သမ္မတ အိ်ုဘားမားနဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ထိန်းသိမ်း ကန့်သတ်လိုသူများအတွက် အရေးနိမ့်သွားတြာ ဖစ်ပြီး၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ကာကွယ်နေတဲ့ အုပ်စုတွေ အင်အားတွေအတွက် အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အိုဘားမားကတော့ သူတို့ဝါရှင်တန်မြို့တော်ဟာ ပြည်သူတွေကို အရှက်ခွဲလိုက်တဲ့ အဖြစ်ပဲလို့ တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန် ၉၀ % က လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်းကို ထောက်ခံသော်လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့ လက်နက်ကုမ္မဏီတွေက ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
အဲသည်အချိန်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်အချို့ထံကို ရိုင်စင်အဆိပ်သုတ်လိမ်းထားတဲ့ စာအိပ်တွေ ပေးပို့ပြီး လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားတာကိုလည်း ဖော်ထုတ်တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်လို သမ္မတနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို စာတိုက်ကနေ စာအိတ်ကတဆင့် အဆိပ်ခပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အမေရိကန်သားကို မစ္စစပီပြည်နယ်ကနေ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၇ ရက် ညနေခင်းမှာတော့ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ၀က်ကိုမြို့၊ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး လူ ၇၀ ကျော် သေဆုံးပြီး လူ ၂၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်မြေသြဇာတွေ မီးစွဲလောင်နေတာကို ရေဖြန်းလိုက်တာမှာ ဓာတ်ပြု ပေါက်ကွဲရာမှာ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်က လူနေအိမ်တွေပါ ထိခုိုက် ပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်အဖြစ်တွေ မတုိုင်ခင် ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့က တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ဟူစတွန်မြို့၊ ဒေသကောလိပ်မှာ စိတ်ဖောက်ပြန်သူ ကျောင်းသားတဦးက ဓားနဲ့ လိုက်တိုက်ခိုက်လို့ လူ ၁၄ ဦးကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စိတ်ရူးပေါက်သူကို အများပြည်သူတွေက ၀ိုင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အာရှမှာက ဧပြီလကို နှစ်သစ်ကူးလ၊ ကောက်သစ်ပေါ်တဲ့လအဖြစ် ပျော်ပွဲဆင်နွှဲကြပေမယ့် အနောက်နိုင်ငံတွေထဲက အမေရိကန်မှာကတော့ အရူးတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်တဲ့လ၊ သွေးစွန်းတဲ့လအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ပြန်ကြည့်ရင် ဧပြီ၃၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ မွန်တာနားအရပ်၊ ဟင်လဲနာမြို့မှာ အမေရိကန်တဦးက လူတွေကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ လူ ၃ ဦး သေ၊ ၂၃ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီ ၁၉ ၊ ၁၉ ၉ ၅ မှာ ဥက္ကလာဟိုးမားမြို့အစုိုးရအဆောက်အအုံကို ဗုံးထာင်ပြီး အမေရိကန်တဦးက တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ လူ ၁၆၈ ဦး သေခဲ့ပါတယ်။
၁၉ ၉ ၃၊ ဧပြီ ၁၉ မှာပဲ အခုမီးလောင်နေတဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံရှိရာ ၀က်ကုိုမြို့မှာ အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ လက်နက်ကိုင်အမေရိကန်အုပ်စုကို နှိမ်နင်းခဲ့ရာမှာ လူ ၇၆ ဦး သေဆုံးပါတယ်။ ကလေးငယ် ၂၀ လည်း ပျက်စီးတဲ့အထိမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
သမိုင်းတလျောက်မှာ ဧပြီလဆိုတာ တော်လှန်တဲ့လ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တော်လှန်ရေး စတင်တဲ့ လက်စင်တန်နဲ့ ကွန်ကော့ တုိုက်ပွဲတွေဟာ ဧပြီ ၁၉ ၊ ၁၇၇၅ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဒီလိုပဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ အာဏာရှင်တွေ၊ အစွမ်းရောက်တွေကလည်း လုပ်ကြံမှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဧပြီမှာပဲ ကျုးလွန်လေ့ရှိပါတယ်။ နံမယ်ဆိုးနဲ့ ကြော်ကြားတဲ့ ၁၉ ၄၃၊ ဧပြီ ၁၉ ၊ ၀ါဆောကျုးကျော်ရပ်ကွက် အရေးအခင်းမှာ ဂျာမာန်တွေက ဂျုးလူမျိုး ၁ သောင်းကျော်ကို သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျုးလူမျိုးတွေက အသေခံပြီး ခုခံခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးတော့ ဧပြီ ၂၀၊ ၁၈၈၉ ဆိုတာ ဖက်ဆစ် နာဇီ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟစ်တလာ မွေးနေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည် ဧပြီ ၂၀၊ ၁၉ ၉ ၉ ၊ ဂျက်ဖာဆန်မြို့နယ်၊ ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်က ကိုလန်ဘိုင်း အထက်တန်းကျောင်းမှာ စိတ္တဇကျောင်းသား ၂ ဦးက သေနတ်နဲ့ ပစ်လို့ ကျောင်းသား ၁၂ ဦးနဲ့ ဆရာတဦး သေဆုံး၊ အခြား ၂၁ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇၊ ဧပြီ ၁၆ ၊ ဗာဂျီးနီးယားတက်ခ် ကောလိပ်ကျောင်းမှာ လူ ၃၂ ဦး သေ၊ ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရအောင် အမေရိကန် သေနတ်သမားတဦးက ရမ်းကား လုပ်ကြံခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၀ မှာ အနောက် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်း ပေါက်ကွဲပြီး လူ ၂၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၈၆ ဧပြီမှာ ရုရှားက ချာနိုဘိုင်းနယူကလီးယားစက်ရုံ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်တွေနဲ့ အနောက်အုပ်စုအတွက် ဧပြီလဆိုတာ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် စိတ္တဇသမားတွေရဲ့ လုပ်ကြံမှုတွေ ကျူးလွန်တဲ့လဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ဧပြီလမှာ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေက လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဥပဒေတခု ပြဌာန်းဖို့ ကြိုးစားတာကတော့ အချိန်ရွေးတာ မှားတယ်လို့ ပြောရင် ကောင်းလေမလားပါပဲ။
No comments: Labels:International TheGeek, News Features
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ ဆုတော်ငွေ အထုတ်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဆရာစံ နှင့် ဗိုလ်စံဖဲ တို့ဖြစ်သည်။ ထိုသုံးဦးထဲတွင် ပထမဆုံး ဆုတော်ငွေ အထုတ်ခံရသူမှာ ဗိုလ်စံဖဲဖြစ်သည်။
ဗိုလ်စံဖဲကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၇ ခုနှစ် တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့ (၁၉၀၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်) အင်္ဂါနေ့တွင် သာစည်မြို့ နယ် ဂုံညင်းနွယ်ဘွဲ့ခြားရွာ၌ အဘဦးဖိုးသိန်း၊ အမိဒေါ်စံမယ်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဦးဖိုးသိန်း ဒေါ်စံမယ်တို့တွင် သားသမီး ခုနစ်ယောက် (မသင်း၊ မအေးချမ်း၊ ကိုသူတော်၊ မစောခင်၊ ကိုစံဖဲနှင့် မစောရှင်) ရှိရာ ကိုစံဖဲမှာ နို့ညှာဖြစ်သည်။
ထို့နောက် မိဘများသည် ဂုံညင်းနွယ်ဘွဲ့ခြားရွာမှာ အရှေ့ဘက် မဲတောရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ စံဖဲ၏ ယောက်ဖ ကိုလုံးသည် သာစည်မြို့သားရေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဂျာမန်အမျိုးသား မစ္စတာတရစ်ထံတွင် အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မစ္စတာတရစ်က စံဖဲကို မွေးစား၍ ကျောင်းထားပေးသည်။ ၄ တန်းသာ နေခဲ့သည်။ စံဖဲကို မစ္စတာ တရစ်က အမဲလိုက်ရာသို့ ခေါ်၍ သေနတ်ပစ်သင်ပေးခဲ့ရာ များမကြာမီ စံဖဲသည် လက်ဖြောင့်သေနတ်သမားပမာ သေနတ်ပစ်ကျွမ်းကျင်သွားသည်။
ယင်းနောက် စံဖဲသည် မဲတောရွာမှ ဦးစံလှ ဒေါ်မယ်လှတို့၏ သမီး မသိန်းရင်နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်။ မသိန်းရင်သည် ရုပ်ရည်ချောမောလှပသဖြင့် ရွာ၏ ကွမ်းတောင်ကိုင်ဖြစ်သည်။ မသိန်းရင်ကို မဲတောရွာသူကြီး ဦးရာပိုင်၏ သား ငပုဆိုသူက တဖက်သတ်ချစ်ကြိုက်နေရာ မသိန်းရင်ကို စံဖဲလက်ထပ်ယူခဲ့သဖြင့် စံဖဲအပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသူဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်အတွင်း သာစည်မြို့တွင်ဓါးပြမှုတစ်ခုတွင် ဓားပြများထံမှ တူမီးသေနတ်တစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိသည်။ ထိုသေနတ်မှာ သားရေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် မစ္စတာတရစ် အိမ်မှ ပျောက်သွားသော သေနတ်ဖြစ်နေသည်။ ဤတွင် ငပုက နယ်ချဲ့ပုလိပ်နှင့်ပေါင်းကာ စံဖဲအား မသင်္ကာမှုဖြင့် ချောက်တွန်း၍ ထောင် ၆ လ ချလိုက်သည်။ စံဖဲ ပထမအကြိမ် မတရားခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
စံဖဲထောင်ကျနေခိုက် အကြံသမား ငပုက မသိန်းရင်အား အရယူလို၍ မသိန်းရင်၏ မိဘများကို အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေး၍ နှိပ်စက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မသိန်းရင်အား စံဖဲထံ ကွာရှင်းစာတောင်းခိုင်းပြီး မသိန်းရင်အား သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ စံဖဲသည် ဒုတိယအကြိမ် ငပု၏ မတရားမှုခံလိုက်ရပြန်သည်။
မဲတောသူကြီးသား ငပုသည် စံဖဲထောင်ကျနေစဉ်အတွင်း ဇနီးအား မတရားသိမ်းပိုက်သည်ကို မကျေနပ်နိုင်သေးဘဲ အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိ အရာရှိအချို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ စံဖဲထောင်မှ ပြန်လွတ်ချိန်တွင် ပြန်လည်ဒုက္ခပေးမည့်ရန်မှ ကြောက်ရွံ့သည့်အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် အက်တူးလူဆိုးစာရင်းဝင်ဖြစ်ရန် လာဘ်ပေးဖန်တီးထားသည်။ တဖန် စံဖဲအား မဲတောရွာ၌ ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်မပေးဘဲ သဲတောမြို့နယ် ဆူးပန်းကျေးရွာသို့ အက်တူးစာရင်းဝင်လူဆိုးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ထားရန် စီမံထားခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ စံဖဲအား တတိယအကြိမ် မတရားမှုပြုခဲ့မှုပင် ဖြစ်သည်။
ဤသို့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် မတရားပြုခံရသဖြင့် စိတ်နာကျည်းနေသော စံဖဲသည် ထောင်မှလွတ်၍ သာဂရရွာရောက်နေသော စံဖဲအား ရာဇ၀တ်အုပ် ဦးညီမောင်သည် ၁၉၂၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီး၍ စစ်ဆေးရန် သာဂရသူကြီး ဦးလာဘအိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာသည်။ သူကြီးကတော် ဒေါ်နန်းနွယ်က ရာဇ၀တ်အုပ်စားရန် မြေပဲလှော်နှင့်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းချထားရာ စံဖဲက ဆာဆာနှင့် ကောက်ယူစားလိုက်ရာ ဤတွင် ရာဇ၀တ်အုပ်ဦးညီမောင်က "ဟေ့ကောင် ဒါလူစားတဲ့အစာကွ မင်းလိုတရားခံလူမျိုး စားဖို့ ချထားတာမဟုတ်ဘူး" ဟူ၍ ငေါက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ရာဇ၀တ်အုပ် ဦးညီမောင်က စက္ကူတောင်းသဖြင့် သူကြီးကတော် အခန်းထဲဝင်သွားစဉ် စံဖဲသည် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူနှင့် နှစ်တောင်ကွာလောက်တွင်ရှိသော သူကြီးထောင်ထားသည့် ဓါးကိုယူ၍ လက်ထိပ်ခတ်ထားသော လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်၍ ဦးညီမောင်ကို ခုတ်သတ်လိုက်သည်။ အစောင့်အဖြစ် လိုက်ပါလာသော ပုလိပ်ငကြွယ်မှာလည်း စံဖဲ၏ဓါးချက်မိ၍ ထွက်ပြေးသွားသည်။
ထိုနေ့မှစ၍ စံဖဲသည် ၀ရမ်းပြေးတောပုန်းဖြစ်သွားလေ၏။ ထိုအခါ ဗန္ဓုလသတင်းစာတိုက်က အထူးသတင်းထောက်များလွှတ်၍ စံဖဲသတင်းကို ဗန္ဓုလတွင် အပတ်စဉ် တခမ်းတနား ထည့်သွင်းရာ စံဖဲသတင်းသည် ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတော့သည်။ အစိုးရက စစ်ပုလိပ်များလွှတ်ကာ စံဖဲကို ဖမ်းခိုင်းသည်။ မမိ။ ဖမ်းလေ၊ မမိလေဖြစ်၍ တဖြည်းဖြည်း ကြာလာသောအခါ စံဖဲသည် ဆုငွေ ၅၀၀၀ ထုတ်ထား ရသော ၀ရမ်းပြေးတောပုန်းဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့ စံဖဲသတင်းကြီးနေစဉ် ဗန္ဓုလသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တို့က 'စံဖဲဒိုင်ယာရီ" ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ 'စံဖဲဇာတာဗေဒင်ဟောစတမ်း" ဟူ၍ တဖုံ စံဖဲသတင်းကို အပ်ချစရာမကျန်အောင် တခမ်းတနား ရေးကြလေသည်။ စံဖဲဓါတ်ပုံ၊ စံဖဲမိခင်ဓါတ်ပုံ၊ စံဖဲနေရစ်ခဲ့သော ကျောင်းပုံ စသဖြင့် စုံလှသည်။ ပုသိမ်ဦးဘသော် ဆိုသူကလည်း အင်္ဂလိပ်ဒဏ္ဍာရီပါ 'တောပုန်းကြီးရော်ဘင်ဟု' အကြောင်းကို ဘာသာပြန်၍ ဗန္ဓုလသတင်းစာတွင် အပတ်စဉ်ထည့်ကာ စံဖဲကို ချီးမြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် လူဆိုးကြီးစံဖဲနှင့် ပုလိပ်ရာဇ၀တ်ဆိုင်ရာဘွဲ့ လေးချို့း' ခေါင်းစဉ်တပ်၍-
သြော်… ကြငှာန်းမအေးပေဘူ့၊ ၀ရမ်းပြေးကိုလ၊ ဖမ်းပေးသူမပေါ်လာသဖြင့်၊ အော်ခါသာ ပုလိပ်မင်းတို့ရယ်က၊ ကြော်ငြာစာ တဆိတ်နှင်းတဲ့ပြင်၊ စိတ်တွင်းဘလောင်ဆူသည့်၊ အမောင်လူစုံထောက်ကြီးတို့မှာပဲ အချောင်ယူကာ နုံသလောက်ခရီးမှာတော့၊ တုန်ကြောက်၍ ငြီးပုံတကယ်ဟာမို့၊ နတ်ရွာမှာ တညံညံသဲပေတဲ့၊ ထယ်ထယ်ဝါ၀ါ ငစံဖဲကိုလ ဆလံကြဲကာ မယှဉ်နိုင်ဘူ့၊ တမင်မှိုင်ကာ ခက်လှသည့်အခင်းတွေနှင့်၊ ရင်ဆိုင်လာလျှင် လက်ရမခွင်းတာကြောင့်၊ သတင်းမလှလို့ ပြည်နဂရာမှာ နော်ဗျာ၊ သြော် အရင်းပထမတော့ ဖျင်းကြပေတာ' ဟူ၍ ရေးသားကာ စံဖဲကို ဂုဏ်ပြုထားလေသည်။
ထို့နောက် " ဆာဂျေအေမောင်ကြီးနှင့် စံဖဲဘွဲ့ လေးချို့း" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် -
"အခါတာရှည်တဘောင်သံမလွဲပေဘူ့၊ အညာသာစည်မှာ မောင်စံဖဲရယ်က၊ ဗြောင်အမှန်ကြဲပါလို့၊ နှိပ်စက်လျှင် အတန်ကြာ (အို့… ဗျာ) အောင်လံမစွဲတာကြောင့်၊ ပုလိပ်ဘက်မှာဖြင့် မကြံသာ။ သြော်…. ၄င်းအတွက်ကယ်ကြောင့်၊ ဒေါင်းကနက်များဖြင့်၊ မောင်းနှက်သလို ဆူဆူညာ၍ လူတကာစိတ်မှာ မအေးအောင်ပ၊ ကူပါ ကူပါ ဘိတ်စာပေးသည်သို့၊ ထိတ်စရာအရေးနော်ဖန် လာကြုံတဲ့အပြင်၊ မြန်မာဘုံမှာ ပါဝါဒြပ်တွေနဲ့၊ ပြန်ကာလှန်ကာ တုန်သလို ဆာအမတ်ရယ်က၊ ရွာရပ်တွင် တခါမွှေသည့်၊ အညာပြေ "ငစံဖဲ" ကိုလ၊ (မင်းတို့ပုလိပ်) မဆလာတွေဟာ အမှန်မရဲတယ်လို့၊ ရန်ပွဲလိုအော်ခါ မန်၍ ကြော်ငြာအတန်တန်ချ လျက်နှင်းတာကြောင့် စလျော်ရှာပြန်ငါ့လက်ထက် တွင်းမှာဖြင့်၊ စိတ်ပျက်ပါတယ် သိပ်ရှက်စရာ သတင်းရယ်လို့၊ အကျဉ်းတွေသမို့ ဗဟိုနာဂရာမှာ နော်ဗျာ သြော်…. ယွန်းဓလေ့ငယ်နှင့် ဖျင်းကြပေတာ" ဟူ၍ စံဖဲအရေးကြောင့်
ဆာဂျေအေမောင်ကြီး ရှက်လေဟန်ဖြင့် စံဖဲကို ထပ်၍ ချီးကျူးထားကြပြန်လေသည်။
ထိုမျှမကသေး ဗန္ဓုလသတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင် ဗန္ဓုလဦးစိန်က 'သတိုးစိန်' ကလောင်ခွဲဖြင့် စံဖဲအကြောင်းကို ၀တ္ထုရေး၍ ချီးမြှောက်ခဲ့ပြန်သည်။ စံဖဲဝတ္ထုကြော်ငြာပုံကိုကြည့်ပါ။ "မရွံ့မထိတ်၊ ခြင်္သေ့စိတ်နှင့်၊ ထိတ်ထိတ် ကြဲ သတ္တိခဲ၊ အာဇာနည်စံဖဲဝတ္ထု" ဟူ၏။ (၁၄-၁၁-၂၇) ထုတ် ဗန္ဓုလသတင်းစာတွင်လည်း "စံဖဲဘယ်မှာလဲ" (ဒုတိယတွဲ) ၀တ္ထုကြော်ငြာကို တွေ့ရသေးသည်။
ထိုမျှမကသေး ဆရာကျင်ခဲ(ရွှေတိုင်ညွှန့်ဖခင်)နှင့် နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်တို့ကလည်း "စံဖဲသီချင်း" ကိုရေး၍ တိုင်းပြည်ကို ဖြန့်လိုက်သေးသည်။ ဤသို့ ဖြင့် စံဖဲသတင်းသည် တောရွာအနှံ့ပျံ့၍ စံဖဲသီချင်းသည် လူထုနှုတ်ဖျားဝယ်သီးနေတော့သည်။ စံဖဲကို ကရုဏာဖြစ်သူတို့ ကလည်း မရှား။ "သင်းကလေး မတရားတာကို မခံနိုင်လွန်းလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ" ဟူ၍ ကရုဏာပွားကာ ခွင့်လွှတ်ကြလေသည်။ လူထုက စံဖဲသွားလာလှုပ်ရှားမှု ကို ၄င်းအား အန္တရာယ်ဖြစ်မည်စိုး၍ သိုဝှက်ထားကြသည်။
ထိုသို့ စံဖဲကို ကရုဏာဖြစ်သူတို့အထဲတွင် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းလည်း ပါလေသည်။ စံဖဲ၏ သတ္တိကို ချီးကျူး၍ ဇာတိမာန်လည်း ဖြစ်ရလေသည်။ ထိုအခါ ဆရာကြီးသည် စံဖဲနှင့် ပတ်သက်သော "ပုံတော်နိုင်မော်ကွန်းဋီကာ" တွင်လည်းကောင်း၊ 'တရုတ်ဒီပနီ ဆောင်ပါးများ" တွင်လည်းကောင်း စံဖဲအကြောင်းဆောင်းပါးကို ရေးလေသည်။ ဆရာကြီးသည် ဓူဝံမဂ္ဂဇင်းတွင် 'စုံတော်မူမှာတမ်း' အမည်ဖြင့် စံဖဲ၏ မျိုးရိုးနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းကို ရေးသား၍ ဇာတိမာန်ဖြစ်လိုက်သေးသည်။
ဆရာကြီးသည် "လူမှာအမျိုး၊ ကြက်မှာအရိုး" ဟူသော စကားအတိုင်းမျိုးရိုးကိုအလွန် လေးစားသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆရာကြီးပိုမိုလေးစားဟန် ရှိသော မျိုးရိုးမှာ ရှေးမြန်မာမင်းလက်ထက်က အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း၊ မင်းမျိုး၊ မှူးမတ်မျိုးတို့ဖြစ်သည်။ မည်သူသည် မည်သည့်အမတ်ကြီး၏ အဆက်အနွယ်ဖြစ်သည်ဟု ကြားလိုက်ရလျှင် ဆရာကြီးသည် ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်ကို လွမ်းလာတတ်လေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြို့လုလင်မှ အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်ခဲ့သော ဦးမင်းရောင်၏ မြေးဖြစ်သည်ဟု ကြားလိုက်ရသောအခါ ဆရာကြီးသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တော်လှန်ရေးမျိုးရိုးပေပဲဟု ပိုမိုကြည်ညိုလေးစားလေသည်။ ဆရာကြီးစိတ်သည် မြန်မာ့သမိုင်းကို နှစ်သက်သောစိတ်၊ ထို့အပြင် သမိုင်းပါ ရှေးမြန်မာများကို လေးစားသောစိတ် အားထားတတ်သော စိတ်မျိုးဖြစ်လေသည်။
စံဖဲသည် မြင်ကွန်းမြင်းခုံတိုင်အရေးက မြင်ကွန်းတို့ဖက်က ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော မြင်းတပ်ဗိုလ်၏ မြေးဖြစ်သည်ကို သိရပြန်သောအခါ ဆရာကြီး ဇာတိမာန်ဖြစ်ရပြန်လေသည်။ စံဖဲသည် မျိုးရိုးအရ သတ္တိကောင်းသူကလေးဟု ချီးကျူး၍ ဘေးကင်းပါစေဟုလည်း ကရုဏာအစွမ်းဖြင့် မေတ္တာပို့သခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာကြီးသည် စံဖဲဘွဲ့ကဗျာမဟာလေးချိုးတွင် -
"သြော်… သရဲဘော်သွေးဟာက မနဲသောအကလေးပေပေါ့၊ မဲတောမွေးရှာသနဲ့ ရှေးမြန်မာအခါရှိစဉ်က၊ ဇာတိအမျိုးပါ ရိုးရာစစ်ပြန်တော့၊ မြန်မာပြည်ကိုးစရာအဆိုးမှာတကယ်လို့၊ သတိုးမဟာဓမ္မရာဇာအဆူဆူနှင်း အပ်ဘူးပေတဲ့၊
အဖိုးမြန်မာဖြစ်သူ မြင်းတပ်မှူးပေမို့ တဦးမှာ အောင်လံစွဲနေကျ၊ မောင်စံဖဲဆိုတာ ဒါယကာကြီးမြေးပေမို့
သွေးအခြေအနေစစ်စရာ ကရိုဏ်းတွေနှင့်၊ ဝေးတမြေခေတ်သာတဲ့ စစ်ကိုင်းဆီက မစ္စတာမှိုင်းကြီး ဟို့နှယ်သည့်နှယ် ကြားရပြန်တော့၊ တပည့်သူငယ်အားမှာအပြစ်ဘယာမညှိုးစေဘို့၊ မေတ္တာပို့ကာ ဆရာသနားမိတဲ့ပြင်" ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စုံတော်မူမှာတမ်း၌လည်း စံဖဲဘွဲ့လေးဆစ်တွင်-
ပဝေအခါဆီ အဖြစ်မှန်းပြန်တော့၊ ပြေဌာနီအသစ်ဖန်းကိုမှ
ခေတ်နွမ်းအောင် တမင်တွန်းခဲ့တဲ့၊ မြင်ကွန်းစံသူပုန်ထစဉ်က
ဂုဏ်ပြမည် ဗျူဟာဆင်တော့၊ အသူရာဘုရင်ဝတိံကဆင်းအောင်ပ
သြော်…. မဟာသမ္မတတွေနဲ့၊ အာဏာပါဏာပြနိုင်တဲ့
ကြုံးဆောင်ကာ၊ ရုန်းတောင်လို့ ကျင်းခဲ့တဲ့
(အမယ်မင်း) န၀င်းစိတ်ကယ်နှင့်၊ မင်းဒြပ်မျို့မသေးစေဘို့၊
ယင်းအရပ်က အချို့ရွေးလိုက်တော့၊ (သြော်) အတင်းသတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ သွေးရယ်ဆင့်၊ (ကိုစံဖဲမှာတောင်၊ မြင်းတပ်ဗိုလ်မြေး။"
ထိုအချိန်မှစ၍ စံဖဲသတင်းသည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားသည်။ အင်္ဂလိပ်ကို မုန်းတီးသော ပြည်သူလူထု ကလည်း အဖိအနှိပ်ခံ စံဖဲ၏သတ္တိကို ချီးမွမ်းလာကြသည်။
စံဖဲသည် သာဂရရွာမှ ထွက်ပြေးပြီး တောပုန်းဘ၀ဖြင့် တစ်ရွာတည်းသား ငနီ၊ ချစ်ကောင်း၊ ကံကြီးမောင်တို့နှင့်အတူ တောပုန်းဘ၀ဖြင့် အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိလက်ပါးစေများအား ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတော့သည်။ ပုလိပ်စိန်ရိုး၏ မြင်းနှင့်သေနတ်အား အိမ်ပေါ်တက်သိမ်းခြင်း၊ နှမ်းကန်သူကြီး ဦးပန်းရည်၏ သေနတ်အား လုယူခြင်း စသည်များ ကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စံဖဲသည် မယားခိုးငပုအား သတ်ရန်အတွက် အတင့်ရဲစွာ သာစည်မြို့ပေါ်ထိ တက်ရောက်လာသည်။ စံဖဲသည် သာစည်နယ်ပိုင်ဝန် ထောက် ဦးအောင်ကျော် အိမ်ရှေ့အနီးမှ သေနတ်ပစ်ဖောက် ထွက်သွားလေ့ရှိသည်။ သတ္တိရှိပြီး လက်ဖြောင့်တပ်သားစံဖဲကို ပုလိပ်တို့က ထွက်၍ မတိုက်ဝံ့ဘဲဖြစ်နေသည်။ စံဖဲသည် မယားခိုးငပုအား မသတ်ရသောအခါ မဲတောရွာနေ ငပု၏ အစ်မတော်သူ မပုအား ၁၉၂၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ ညက သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်သွားရာ ပုလိပ်တို့လည်း မျက်လုံးပြူးကြရသည်။ စံဖဲအား အမိဖမ်းနိုင်သူအား ဆုတော်ငွေ ၅၀၀၀ ကျပ် ထုတ်ထားသော်လည်း မည်သူမျှ မဖမ်းဝံ့ဘဲ ဖြစ်နေသည်။
ဤကဲ့သို့ ဆုတော်ငွေ ထုတ်ပြန်သည်ကို တန်ပြန်သည့်အနေဖြင့် စံဖဲကလည်း မယားခိုးငပုနှင့် သာစည်နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်တို့၏ ဦးခေါင်းကို ရရှိအောင် မိမိအားကူညီလျှင် ဆုတော်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်ပေးမည်ဟု (၁၀)တန်ငွေစက္ကူတွင်ရေး၍ သာစည်မြို့ပိုင်ရုံးတွင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကပ်ထားလေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ စံဖဲက အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား စိန်ခေါ်ရာမှ ဗိုလ်စံဖဲအမည်တွင်ခဲ့သည်။
တောပုန်းကြီးစံဖဲသည် တောပုန်းဘ၀တွင် မဲတောရွာမှ ချစ်သူ မငွေနုအိမ်သို့ ညအခါ လာလေ့ရှိကြောင်း သတင်းရရှိထားသော မိတ္ထီလာအပိုင်မှ ရာဇ၀တ်အုပ်ဝန်ထောက်ကလေး အောင်ကျော်မိုး၊ ရာဇ၀တ်အုပ် ဦးရွှေခဲ၊ ရာဇ၀တ်အုပ် ဦးရွှေအောင်နှင့် ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် ၁၉၂၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ညတွင် မဲတောရွာသို့ စံဖဲအား ဖမ်းဆီးရန်ရောက်ရှိလာကြသည်။
မဲတောရွာရှိ ၄င်း၏ချစ်သူနေအိမ်သို့အလာ ပုလိပ်အဖွဲ့နှင့် ဗိုလ်စံဖဲတို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ၊ ရာဇ၀တ်ဝန်ထောက် အောင်ကျော်မိုးမှာ လက်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိပြီး ပုလိပ်တပ်သားချစ်မိုးမှာ ဗိုလ်စံဖဲလက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးသွားလေသည်။ ဗိုလ်စံဖဲသည် မည်သည့်ဒဏ်ရာမှမရရှိဘဲ လွတ်မြောက်သွားသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဗိုလ်စံဖဲသည် တောပုန်းဘ၀ဖြင့် ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်း သွားလာလှုပ်ရှားပြီး အင်္ဂလိပ်တို့၏ လက်နက်တုတ်ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့အား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဒုက္ခပေးလေသည်။
ဗိုလ်စံဖဲသည် ဤကဲ့သို့ စစ်ပုလိပ်များ၊ စုံထောက်များ ၀န်းရံချထားသည့်ကြားမှ ရုပ်အမျိုးမျိုးပြောင်း၍ သာစည်မြို့ပေါ်တက်၍ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်သောက်ခြင်း၊ ညောင်ရမ်းဈေးသွားခြင်း၊ ရွှေဂူကြီးဘုရားပွဲလာခြင်း စသည်ဖြင့် ၀င်ရောက်သွားလာကာ ပုလိပ်များအား လက်တစ်လုံးခြားလှည့်စားသွားလေ့ရှိသည်။
ဗိုလ်စံဖဲသည် ၁၉၂၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ညတွင် ရွှေရင်မျှော်ဘုရားပွဲသို့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်သတင်းလွှင့်ထားသည်။ အစိုးရဘက်မှ ရွှေရင်မျှော်ဘုရားပွဲအတွင်း ပုလိပ်များထူထပ်စွာ လုံခြုံရေးချထားလိုက်သည်။ ဗိုလ်စံဖဲသည် ရုပ်ဖျက်၍ ရွှေရင်မျှော်ဘုရားအား အေးအေးဆေးဆေး ဖူးမြော်ကာ ပန်းဆီမီးကပ်လှူပူဇော်၍ ဘုရားရွှေချကာ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားရာ မည်သူမျှ မသိလိုက်ချေ။ ဗိုလ်စံဖဲသည် အဝေးရောက်မှ သေနတ်ဖောက်၍ အသံပေးမှ စံဖဲ ပွဲတော်တွင်းသို့ လာသွားကြောင်း ပုလိပ်တို့ သိရှိကြရသည်။
ဗိုလ်စံဖဲအား ထုတ်ပြန်ထားသော ဆုတော်ငွေကို မက်၍ လိုင်စင်သေနတ်ကိုင်ထားသူ ၀မ်းတွင်းမြို့မှ နယ်ချဲ့အစိုးရအလိုတော်ရိ ရှေ့နေ ဦးရွှေဗျိုင်းနှင့် စာရေးကြီး ဦးသက်ထွန်းတို့သည် စံဖဲအား ဖမ်းရန် သာဂရရွာမှ ဦးသက်ထွန်း၏ ညီတ၀မ်းကွဲ ကိုကံစ၏အိမ်သို့ လာရောက် စုဝေးကြသည်။ ထိုနေ့ကား ၁၉၂၇ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းကို ဗိုလ်စံဖဲကြားထားသည့်အတွက် ကိုကံစ၏ အိမ်ကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ ရှေ့နေကြီး ဦးရွှေဗျိုင်းမှာ ဆုငွေမရလိုက်ဘဲ စံဖဲလက်ချက်ဖြင့် အသက်ပါသွားခဲ့သည်။ စာရေးကြီး ကိုသက်ထွန်း၊ ကိုကံစတို့မှာ ဒဏ်ရာရပြီး ကိုသက်ထွန်း၏ ဇနီး မပုမှာ အချောင်သေဆုံးသွားခဲ့လေသည်။
တောပုန်းကြီးဗိုလ်စံဖဲ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့် နယ်ချဲ့အစိုးရမှာလည်း သိက္ခာကျဆင်းပြီးရင်း ကျလာကာ လုံခြုံရေးပါ ထိခိုက်လာသဖြင့် သာစည်တွင် ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့များစုပေါင်း၍ စီမံချက်ချကာ အမိအရ ဖမ်းဆီးရေးအတါက် မြင်းစီးပုလိပ်တပ်ဖွဲ့များဖြင့် တောနင်းပိုက်စိပ်တိုက် ရှာဖွေကြတော့သည်။
ဗိုလ်စံဖဲလွတ်မြောက်နေကာ အစိုးရအား အမျိုးမျိုးနှောင့်ယှက်နေသဖြင့် ကြွက်မနိုင်ကျီမီးနှင့်ရှို့ဆိုသလို စံဖဲဝင်ထွက်သွားလာရာ ကျေးရွာများကိုလည်း အစိုးရက အမျိုးမျိုးနှိပ်ကွပ်တော့သည်။ ဗိုလ်စံဖဲအား ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာများတွင် လာရောက်တပ်စခန်းချ နေသော စစ်ဗာရီစစ်ပုလိပ်များအတွက် ထင်း၊ ရေ၊ ကြက် ဟင်းချက်စရာ နေ့စဉ်ပေးပို့နေရရုံမျှမက လှည်းကူလီ၊ လူကူလီလိုက်ရလွန်းသဖြင့် ကျေးရွာသားတို့သည် မိမိအလုပ်ကိုမိမိ မလုပ်နိုင်တော့ချေ။ ထို့အပြင် ဗိုလ်စံဖဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခြင်းသည် သာဂရရွာသားများ သူကြီးကို အကူအညီမပေးခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုကာ ကျေးရွာအက်ဥပဒေပုဒ်မ (၁၃)အရ တရွာလုံးကို ဒဏ်ငွေ ၆၆၅ ကျပ် ဒဏ်ရိုက်တော့သည်။ ထိုစဉ်က ယင်းဒဏ်ငွေသည် အလွန်ဝန်လေးသော ကိစ္စဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် ၁၉၂၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် ကြာသပတေးနေ့ကျပ် သာစည်မြို့နယ် မောင်းမဆည်ရွာအနီး တောထဲတွင် သေနတ်ခေါင်းအုံး၍ ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် လဲနေသော ဗိုလ်စံဖဲကို အစိုးရတပ်များက တောနင်းရှာဖွေရာ ရှာမတွေ့ဘဲဖြစ်နေရာ ဗိုလ်စံဖဲက ပုလိပ်ကို လက်ယပ်ခေါ်ပြီး `ငါစံဖဲဖြစ်တယ်´ ဟု သူကိုယ်တိုင် အဖမ်းခံရမှ ဖမ်းမိတော့သည်။ အစိုးရအစွမ်းကြောင့် ဖမ်းမိခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့်သာ ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တောပုန်းကြီးဗိုလ်စံဖဲ၏ အမှုကို မိတ္ထီလာမြို့တရားရုံးတွင် တရားသူကြီး မစ္စတာမက်ကနော ဦးဆောင်၍ တစ်နှစ်ကြာ စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တောပုန်းကြီးဗိုလ်စံဖဲအမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကံကြီးမောင်နှင့်ငနီတို့ကို အားပေးကူညီပူးပေါင်းမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၄၁) နှစ်စီ ကျခံရန် စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း အယူခံဝင်၍ ကံကြီးမောင်အား ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်း (နှစ် ၂၀) ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေး ခဲ့သည်။
ဗိုလ်စံဖဲအား ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဟုဆိုကာ ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၆း၃၀ နာရီတွင် မြင်းခြံထောင်ကျပ် ကြိုးပေးကွပ်မျက်လိုက်လေသည်။ (ဇွဲသန်းသျှင် (သုံးဆယ်) ရေးသားသော `ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့်တောပုန်းကြီစံဖဲ´ ဆောင်းပါး (မော်နီတာဂျာနယ် ၁၉-၆-၂၀၁၁) ၌ ၁၉၂၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော `မြန်မာ့ရက်စဉ်သမိုင်း´ ပထမတွဲ စာမျက်နှာ ၂၅၂ ၌ ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ဟူ၍လည်းကောင်း မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။)
ဗိုလ်စံဖဲသည် ကွယ်လွန်စဉ်က အသက် ၂၂ နှစ် သာ ရှိသေးသည်။ မည်သို့ဆိုစေ… နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှအစိုးရ အုပ်စိုးနေသော ကိုလိုနီခေတ်၌ ပထမဆုံးဆုတော်ငွေ အထုတ်ခံရသည့် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသမား ဗိုလ်စံဖဲ၏ မတရားမှုအတွက် ခေါင်းငုံ့မခံဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော သူ၏ သတ္တိကို ဂုဏ်ပြုရမည်ဖြစ်ပေသည်။
(၁) ဇွဲသန်းသျှင် (သုံးဆယ်) `ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့်တောပုန်းကြီစံဖဲ´ ဆောင်းပါး (မော်နီတာဂျာနယ် ၁၉-၆-၂၀၁၁)
(၂) ကိုတင်လှိုင် (မိတ္ထီလာ) `နယ်ချဲ့အစိုးရ၏ ပထမဆုံးဆုငွေအထုတ်ခံရသည့် တော်လှန်ရေးသမား စံဖဲ´ (မော်နီတာဂျာနယ် ၆-၁၁-၂၀၁၁)
(၃) ဦးဟုန်ဝမ် `သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့်စံဖဲ´ တက္ကသိုလ်ပညာပဒေသာစာစောင် တွဲ-၆၊ အပိုင်း-၄၊ ၁၉၇၁။
(၄) သန်းဝင်းလှိုင်၊ အနှစ်ချုပ်မြန်မာ့သမိုင်းအဘိဓာန် ပထမအတွဲ၊ ပညာရွှေတောင်စာပေ၊ ပထမအကြိမ် ၂၀၁၀။
(၅) L.U.G. Tripp, Boh San Pe and Other Glimps of life in Burma, Bombay, Mody's Diamond Printing Works,1944.
(၆) မာဂဓီသာစည်၊ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးသမားကြီးဗိုလ်စံဖဲ၊ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်၊ ၁၉၉၉။
သင်္ကြန်အတတ်နေ့ "ပေးဆပ်သူများ" သံချပ်လှုပ်ရှားမှု
သင်္ကြန်အတတ်နေ့တွင် ဖိတ်ကြားထားရှိသည့် စံပြဈေး၊ Super One ကုန်တိုက်အနီး၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီရုံး (ဒေါပုံ)၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ သီတာဆိပ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ ဗမာသစ် ရေကစားမဏ္ဍာပ်၊ ရွှေငါးမောင်မောင် လသာမြို့နယ်၊ ရွှေဝါဆန်မြေမဏ္ဍာပ် သုဝဏ္ဏမြို့နယ်၊ ရွှေစင် ရေကစားမဏ္ဍာပ် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ အင်းဝလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မေခလာ ခန်းမ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရုံး မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ သန္တာလမ်း၊ င/ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အစရှိသည့် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အသီးသီးများသို့ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ "ပေးဆပ်သူများ" ပြည်သူ့အကျိုးပြု သံချပ်အဖွဲ့မှ သွားရောက်၍ အင်တိုက်အားတိုက် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တော့သည်။
Natural Curse in Kachin - Op-Ed
နော်ဂွန်ဂျဝါ၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၃
UK အင်္ဂလန်မှ လူတစ်ဦးက ကီလိုမီတာ ၆၀ လမ်းလျှောက်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံက လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် Fund Raise လုပ်မယ်။ စပွန်စာတောင်းတဲ့စာ ရရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိထ္ထီလာမှာဖြစ်တဲ့ လူသောင်းနဲ့ချီပြီး အိမ်ခြေပျက်စီး၊ လူ၄၀ကျော် သေကြေ (အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်) ကို မူဆလင်များအတွက် လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ သူရဲ့ကီလိုမီတာ ၆၀ လမ်းလျှောက်ခရီးထက် ဒီထက် အဆပေါင်းများစွာ လူ့အခွင့်ရေးမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် ကီလိုမီတာ ၁၁၆၁ ခရီးရှည်ကြီး လူငယ်များစွာ ရန်ကုန်မှလိုင်ဇာသို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာက မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ကတည်းက အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ၂၀၀၃ ထောက်လှမ်းရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန် ပြုတ်သွားမှပဲ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ ထိုစဉ်ကာ မြန်မာ ထောက်လှမ်းရေးရဲ့၊ ယုတ်မာရက်စက်၊သတ်ဖြတ်ခဲ့ပုံများ ထောင်များမှတ်တမ်းစာအုပ်များစွာ မြန်မာလို၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားတာ၊ တကယ်မှဟုတ်ရဲ့လား လို့တောင် ထင်မှတ်ရပါတယ်။
ဘာလဲဟဲလူ့ငရဲ (ဦးဝင်းတင် NLD)၊ ရဲ့ 'ဘာလဲဟဲ့လူငရဲ'၊ မြန်မာအစိုးရက ဂျာမဏီသို့ လွှဲပေးလိုက်တဲ့ Liao Yiwu ရဲ့ စာအုပ်များ၊ "မင်းဒင် - သက်ခိုင်" ကဲ့သို့သော စာအုပ်များစွာ မှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ ၂၀၁၁ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်မှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ထောင်တွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများစွာ လုပ်နိုင်ခဲ့တော့၊ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပြည်ပမီဒီယာများ ပြောဆိုမှုမှာ ကချင်အရေးအခင်းကို မေ့ထားပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းပြီး၊ မြန်မာစစ်တပ် ကချင် KIA နယ်မြေများသို့ သယံဇာတစစ်ပွဲ ဖြစ်လာကတည်းက၊ ကချင်ပြည်သား တစ်သိန်းခန့် ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်သွားပြီး၊ မြို့ရွာများစွာ အစိုးရစစ်တပ်မှာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပါတယ်။ ၂ဖက်သေကြေမှုနဲ့များကတော့ ထောင်ဂဏန်း မက ..နောက်ဆုံး ပြည်တွင်းစစ်ကို တိုက်လေယာဉ်၊ ဗုံးကြဲလေယာဉ်များပါဝင်လာခြင်း ... တရုပ်က ငြိမ်ကြည့်နေပြီး၊ အမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကပါ ၀င်ပြောမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ၂၀၁၃ မှာ စစ်ရပ်စဲခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီစစ်ပွဲဟာ အိမ်ကြက်ခြင်း အိုးမဲသုတ်ပြီး တိုက်ခံရသလား.. လို့ မေးခွန်းရှိပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သယံဇာတစစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့အဆင်ပြေပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန်သြဇာရှိတဲ့ ထိုင်းနယ်စပ် ကေအင်ယူ (ကရင်လက်နက်ကိုင်)များနဲ့ မြန်မာစစ်တပ် အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ အခု တရုပ်နဲ့မြန်မာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတော့ သေချာပါတယ်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းခြင်း၊ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းအရေးခင်းများဟာ တရုပ်ပြည်ရဲ့ မဟာရွှေဓါတ်ငွေလိုင်းကြီးအထိ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဇတ်လမ်းများရဲ့ ရလဒ်တစ်ခုလို့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူနဲ့စာရေးဆရာ ဦးကျော်ဝင်းက ကောက်ချက်ချထားပါတယ်။
မြစ်ဆုံ၊ လက်ပံတောင်း၊ ရွှေဓါတ်ငွေ့နဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းပေါင်း ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိတဲ့စီးပွားရေးစာချုပ် နစ်နာချက်များကို ယခုခေတ် ပညာရှင်မြန်မာများက အမှန်သို့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် တရုပ်ပြည်ဟာအလွန်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်၊၀၊ရှမ်း လက်နက်ကိုင်များစွာ တရုပ်နယ်စပ်မှာ ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်မြန်မာအစိုးရနဲ့ ချစ်ကြည်လာခြင်းဟာ တရုပ်အစိုးရ စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်အစိုးရ၊ စစ်တပ်နဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်၊ ပြည်သူလူထု အားလုံး ညီညွတ်မှု ရဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။
မူဆလင်များ နစ်နာချက်ထက် ကချင်ပြည်နယ်သားများ နစ်နာချက်က အများကြီးပိုပါတယ်။ အားလုံးငြိမ်းချမ်းဖို့ရာ အစိုးရနဲ့လူနည်းစုများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပြည်သူများ တခဲနက်တောင်းဆိုမှုများကို မြန်မာအစိုးရသစ်က ခွင့်ပြုခဲ့လို့ မြစ်ဆုံးစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရတယ်။ အခု ကချင်စစ်ပွဲလည်း ၂နှစ်နီးပါး အကြာမှာ ရပ်ဆိုင်းသွားရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကနေ ကချင်ပြည်၊ လိုင်ဇာမြို့အထိ ကီလိုမီတာ ၁၁၆၁ ခရီးရှည်၊ လမ်းလျှောက်ငြိမ်းချမ်းရေးလူငယ်များအဖွဲ့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
For Continue Prayers, Jackie Evancho – To Believe
Photo: Solidarity Kachin
No comments: Labels: Op-Ed
Ei Kyaw Aww - Staire
ဖွတ်ကလေးတစ်ယောက် တောက်တခေါက်ခေါက်နှင့် အီကြာအော်၏ အိမ်သို့ ပေါက်ချလာသည်။
"ဘယ်ကောင်တွေလည်း ဖွတ်ကလေးရဲ့ "
"ဂျပံရွာသားတွေပေါ့ဗျာ၊ ကျုပ်တို့ အမေပုကိုများ ရုပ်ကိုဆိုးတယ် ပြောနေကြတယ်"
အမေပု တစ်ယောက် ခက်သေးရွာမှ ဂျပံရွာသို့ အလည်ရောက်နေသည် မဟုတ်ပါလား။
"ကျုပ်တို့ အမေပုလောက် လှပကျော့ရှင်းပြီး ခက်သေးရွာက ဖက်ချင်မယ်တွေတောင် အရှုံးပေးရတာကို သူတို့က ရုပ်ဆိုးတယ်ပြောတာ တော်တော်ကို စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတယ်"
ဖွတ်ကလေးက မကျေမချမ်း ထပ်ပြောသည်။
"ဟေ့ကောင် ဖွတ်ကလေး မင်းက ဖက်ချင်နေလို့ "ဖက်ရှင်မယ်" တွေတောင် "ဖက်ချင်မယ်" ဖြစ်ရရှာတယ်"
"ဆရာအော်တောင် တခါတုန်းက ဖက်ချင်တယ် ပြောပြီးတော့"
အီကြာအော်က ဒေါ်အွန်မေးရှိရာ မီးဖိုချောင်ဘက်သို့ အသာကလေး လက်ညှိုးထိုးပြီး ကြားသွားဦးမယ်ဟူသော အမူအရာဖြင့် ဖွတ်ကလေးကို သတိပေးလိုက်သည်။
"ဒါနဲ့ ဘယ်တုန်းက အမေပုကို ရုပ်ဆိုးတယ် ပြောတာလည်း" ဟု အီကြာအော်က အံ့သြတကြီးဖြင့် မေးလိုက်သည်။
"အမေပု သူတို့ရွာကို ရောက်ရောက်ချင်း အလံတွေကိုင်ပြီး "ရုပ်ကိုဆိုး၊ ရုပ်ကိုဆိုး " ဆိုပြီး အော်ကြတာလေ"
"ဟေ့ကောင် ဖွတ်ကလေးရဲ့ ၊ မင်းကလည်း တယ်ပြီးခက်ပါလား၊ "ယိုးကိုဆို" ဆိုတာဂျပန်လို "ကြိုဆိုပါ၏" လို့ ပြောတာကွ၊ အဲဒါကြောင့် အမေပုက ပညာ ကောင်းကောင်းသင်ကြ၊ ဘာသာစကားတွေ အမျိုးမျိုးတတ်အောင် လုပ်ကြလို့ ပြောတာ…….၊ ဗဟုသုတ နည်းတော့ ယုံထင်၊ ကြောင်ထင်၊ ဖွတ်ထင်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ကွာ"
ထုံးစံအတိုင်း နည်းနည်းသိလျှင် များများ ဆရာလုပ်တတ်သော ခက်သေးရွာသားတို့ထုံး နှလုံးမူ၍ ကြားဘူးနားဝ မတောက်တခေါက် ဂျပံစကားဖြင့် သူက ဖွတ်ကလေးကို ဆရာကြီး လုပ်လိုက်သည်။
"ဆရာအော် အဲဒါဆိုရင် "ကော်နီ ချီးဝါး" ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလည်း"
"ဟေ့ကောင် ဖွတ်ကလေး ငါ့ကော်နီလေးကို မထိနဲ့ကွ"
ကော်နီကား အီကြာအော်၏ အချစ်တော် ခွေးကလေးပင် ဖြစ်သည်။ အီကြာအော်ကား အနီးအနားတွင် ကလေးများမရှိသောကြောင့် ကော်နီကို အချစ်တွေ ပုံထားသည်။ ကော်နီကလည်း အီကြာအော်နားက တဖ၀ါးမှမခွာ အမြီးတနန့်နန့်နှင့် နေလေ့ရှိသည်။ ယခုလည်း အီကြာအော် အိုးခွက် ပန်းကန်များ ဆေးကြောနေချိန်တွင် အနားက မခွာတော့။
"မင်းကလည်းကွာ လုပ်ပြန်ပီ၊ "ကော်နီ ချီးဝါး" မဟုတ်ပါဘူး၊ "ကော်နီး ချီးဝါး" ဆိုတာ ဂျပံလို နေ့လည်မှာ "ဟဲလို" ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်တာပေါ့ကွ"
"ကိုစိုင်း မစု" နဲ့ "စုကိုချီ" ဆိုတာတွေကရော ဘာတွေလည်း ဆရာအော်"
ဖွတ်ကလေးမေးမှ အီကြာအော်လည်း သေသေချာချာ စဉ်းစားရသည်။
"မင်းဟာတွေကလည်း အချစ်ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ဝင်ခန်းကျနေတာပဲ"
"ကိုဇိုင်း မတ်စု" ဆိုတာ "အများကြီး"၊ "စုကိုရှီ" ဆိုတာ "နည်းနည်း" ကိုပြောတာ"
"အရီး ခါးတို့" ဆိုတာလည်း ပြောနေကြတာ ကြားတယ်"
"အရီး ခါးတို့" မဟုတ်ပါဘူကွာ "အာရီး ဂတို့" ဆိုတာ "ကျေးဇူးတင်တယ်" လို့ပြောတာ၊ ဒါပေမဲ့ မင်းအရီး အွန်အွန်ကိုတော့ ခါးသွားမတို့လေနဲ့ ကျေးဇူးမတင်ပဲ သူ့ခါးကို တို့ရင် ယောင်ပြီး မင်းကို ငြုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ မွှေလိမ့်မယ်"
"မင်းတို့က ဂျပံစကားဆိုရင် "ဆုရှီး" လောက်ပဲ သိတာကိုးကွ"
"ဒါနဲ့ ငါကြားဘူးတဲ့ ဆုရှီး ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ကို ပြောပြရဦးမယ်"
"လုပ်ပါဦး ဆရာအော်ရဲ့ "
"ခက်သေးရွာ နေပူတော် ရပ်ကွက်တစ်ခုက ဘဘကြီးတစ်ယောက် အကြောင်းပေါ့…….၊ ဘဘကြီးက တပည့်တပန်းတွေအများကြီးနဲ့…..၊ တစ်နေ့တော့ သူ့တပည့်တွေ အသုံးမကျလို့ ဆဲပြီး "မင်းတို့ စု ချီးပဲ စား" လို့ ဆူတာကို တပည့်တွေက မှတ်ထားသတဲ့….၊ အဲဒါ နေပူတော်သား တပည့်တစ်ယောက်က မှတ်ထားပြီး တခြားသူတွေကို ပြန်ပြောပြတယ်၊ နေပုတော် ပင်းမနားသား စစ်စစ်တွေက စကားပြောရင် "ရှ" နဲ့ "ချ" ကို မပီကြဘူး၊ "ရှောက်သီး" ဆိုရင် "ချောက်သီး"၊ "ချစ်တယ်" ဆိုရင် "ရှစ်တယ်" လို့ ဆိုလေ့ရှိတယ်၊ အဲဒီတပည့်က တခြားသူတွေကို ပြန်ပြောပြတယ်၊ "ဟေ့ကောင် ငါတို့ ဘဘဂျီးက ဆုရှီး စားခိုင်းတယ်" ဆိုပြီးတော့ပေါ့၊ တစ်နေ့ကျတော့ နိုင်ငံဂျားပြန် တပည့် တစ်ယောက်က ဘဘဂျီးကို ဖားပြီး သံတော်ဦး တင်တယ်လေ၊ ဘဘကြီး ဆုံးမတဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံဂျားရောက်တော့ ဆုရှီးကို မနည်းရှာပြီး အ၀စားခဲ့တဲ့အကြောင်း ဖားတို့ထုံးအတိုင်း လျှောက်တာပေါ့…..၊ဘာပြောကောင်းမလည်း ဘဘဂျီးက ထပ်ဆဲတာ ခံရတာပေါ့….. "
ဖွတ်ကလေးတစ်ယောက် ဆုရှီး ဇာတ်လမ်းကိုကြားပြီး အူတက်တောင် ရီလေတော့သည်။
ထိုအခိုက်တွင် မီးဖိုချောင်မှ ရှောင်တခင် ထွက်လာသော ဒေါ်အွန်မေးက ကြားသွားပြီး
"ကိုအော်…….၊ ရှင်…..ဒီ မဟုတ်က ဟုတ်က ဆုရှီး ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြန်ပြီလား၊ ခိုင်းထားတဲ့အတိုင်း ပန်းကန်တွေတော့ ပြီးအောင် မဆေးဘူး၊ တော်……. အဲဒီလို လေပဲများနေလို့ တော်နဲ့အတူ ဂျပံရွာမှာ ပန်းကန်အတူ သွားဆေးခဲ့တဲ့ အချိုရည်နဲ့လုပ်စားတဲ့ ခိုနီကိုဂျော်ဂျော်တောင် ဆေးရုံတွေ ဘာတွေ လှူနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ရှင်က ပန်းကန်ပဲ ဆက်ဆေးနေရတာ"
အီကြာအော်လည်း အရှိုက်ထိသွားပြီး "မင်းက ဘဘဂျီးတို့နဲ့ ပေါင်းတာမှ မကြိုက်တာကိုးကွ၊ ငါကတော့ ပေါင်းတော့ ပေါင်းချင်သား" ဟှု ရင်နာနာဖြင့် စ်ိတ်ထဲမှ တိတ်တိတ်လေးပြောကာ နောက်ဆုံးပန်းကန်ကို ဆေးရင်း လက်စသတ်လိုက်သည်။
"ခိုနီတွေက ဆုရှီး……. သိပ်ကြိုက်ကြတာလေ" ဟု အီကြာအော်က ပင်းမနားသား လေသံဖြင့် ရွဲ့ ၍ ပြောလိုက်လေသည်။
ထိုအခါတွင် ဖွတ်ကလေးက ရာသီဥတု မကောင်းမှန်း သိသဖြင့် နှုတ်ဆက်၍ ထွက်သွားတော့သည်။
"အရီး ခါးတို့…. ကျေးဇူးပဲ ဆရာအော် နဲ့ အရီးအွန်ရေ၊ ကျွန်တော် ယုန်ကန်ဆေးရုံမှာ အလုပ်ရှိလို့ သွားလိုက်ပါဦးမယ်"
ဖွတ်ကလေး တစ်ယောက် ဆေးရုံကြီးဘက်သို့ ခြေဦးလှည့်ရင်း ဒီတစ်ခါ ယုန်ကန် ဆေးရုံအသစ် ဆောက်ရန်အတွက် အကူအညီပေးရန် ဂျပံဂျီးများ လာလျှင်တော့ဖြင့် "ရုပ်ကိုဆိုး" ဟု ကြိုဆိုလိုက်ပြီး၊ "ကော်နီ ချီးဝါး"ဟု နှုတ်ဆက်လိုက်မည်။ ယုန်ကန်ဆေးရုံကြီးမှ ဆရာသမား အုပ်ကလေး နှင့် အုပ်ကြီးများ ကိုတော့ နှစ်ကူးမှာ "စုချီး" အဲ…. "ဆုရှီး" ကျွေးပြီး ကန်တော့လိုက်ရင် ကောင်းမလား တွေးမိကာ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ပြီး ပြုံးမိလေတော့သတည်း။ ။
No comments: Labels: staire,အီကြာအော်
Ku Mo Jo - Thagyan Business
No comments: Labels: Cartoon Box, Ku Mo Jo
88 Generation - Min Ko Naing & KO KO Gyi to visit USA in May
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၃
မြန်မာပြည်၏ ကျောင်းသား၊ လူငယ်၊ ပြည်သူလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ (ကို)မင်းကိုနိုင် နှင့် (ကို) ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့ မေလ ပြည်ပခရီးစဉ်အစီအစဉ်မှာ အမေရိကန်ပြည်သို့လည်း လာရောက်လည်ပတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေလ ၁၈ ရက် တောင်ကိုရီးယားမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆုတခုဖြစ်တဲ့ ဂွမ်ဂျုးဆုကို ကိုဂျင်မီနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့က သွားရောက် လက်ခံကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းနောက်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ (ကို)ကိုကိုကြီးတို့က တောင်ကိုရီးယားကနေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ထွက်ခွာလာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီ အခြေစိုက် NED အဖွဲ့ကြီးက ချီးမြှင့်တဲ့ (၂၀၁၂ ခုနှစ်) ဒီမိုကရေစီဆုကို လက်ခံရယူဖို့ ဖိတ်ကြားချက်အရ လာရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်နောက်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တ၀ှမ်းမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာကွန်မြူနီတီက တိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လက်ခံကျင်းပဖြစ်ကြမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ယခု ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အမေရိကန်ခရီးစဉ်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ (ကို) ကိုကိုကြီးတို့တွေအနေနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်းတွေ၊ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားမိသားစုတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်း သတင်းရရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုဌေးကြွယ်ရဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်မှာလည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိကြားသိရသလောက်ကတော့ - မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီသို့ ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းနောက် နယူးယောက်မြို့တော်၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့တော်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ၊ အယ်လ်အေမြို့တော်၊ လပ်စ်ဗေးဂပ်စ်မြို့တော် စသည် နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲအစီအစဉ်များကိုလည်း ဆက်လက် စုံစမ်းပြီးတော့ သတင်းပေးပို့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈၈ မျုိးဆက်ကျောင်းသားများဟာ ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်း၊ ၎င်းတို့လွတ်မြောက်ပြီးနောက် ၂၀၁၃ မှ စတင်ပြီးပြီး ပြည်ပခရီးစဉ်များ ကူးသန်းခဲ့ပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီမှာ ဖီလစ်ပိုင်၊ နောက် စင်္ကာပူနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ဥရောပနိုင်ငံများကို သွားရောက်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယခု ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်ခရီးစဉ်ပြီးရင် ဗြိတိန်ကို သွားရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမင်းဇေယျ၊ ဦးမြအေး၊ ဦးဌေးကြွယ်၊ ဦးမာကီး၊ မမီးမီးနှင့် မနီလာသိန်းတို့ ၈ဦး လန်ဒန်ကို ဇွန် ၁၉ မှ ဇွန်လကုန်အထိ သွားရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
No comments: Labels: Local News Headlines
သတင်း ထွန်းဝေ ဘာသာပြန်သူ နန်းခမ်းမိုထွန်း၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၃
၂၇ နှစ်ကြာ ကွဲကွာနေပြီးနောက် ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်၍ အလည်ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာပြည်ကအကြီးဆုံး အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ ယနေ့ ဧပြီ ၁၇မှာ ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်တဲ့ ပြဌာန်းချက်ပါဝင်နေတဲ့ ယခုလက်ရှိ အခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းလဲဖို့က ဒီမိုကရေစီ မြန်မြန်ရောက်ဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်လို့ အလေးအနက် ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၇ မနက်ပိုင်းက တိုကျိုမြို့၊ Bunkyo နယ်မြေမှာရှိတဲ့ တိုကျိုတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းမှာ သွားရောက်ပြီး ကျောင်းသား ၄၀၀ ခန့်နှင့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဟောပြောပွဲမှာ ဒေါ်စုက 'ယခုမှစ၍ ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့် လူငယ်များအား တိုင်းပြည်အတွက် ပြန်ကြည့်ဖို့ကို ပြောစရာမလိုဘဲ၊ လူသားများအား အကျိုးရှိစေသည့် အရာကို လုပ်ဖို့ အားစိုက်နှလုံး သွင်းသွားစေချင်တယ် …' လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
တဖန် ဒေါ်စုက မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်၍ 'ယခုအထိ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို မတွေ့ကြုံရသေးပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီစနစ် စတင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်' လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၅ မှာ ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားမျှတပြီး လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်လို့လည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒေါ်စုက 'တပ်မတော်နဲ့ ဆွေးနွေးစကားပြောခြင်းဖြင့် အလျင်မြန်ဆုံး အခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲမှု ကို လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ပိုပြီး တိုးတက်လာစေရန် လွှတ်တော်ရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ နေရာက နေရာများ ရယူထားတဲ့ တပ်မတော်အတွက် အရေးပါအရာရောက်တဲ့ပြဌာန်းချက် ပါဝင်နေတဲ့ ယခုလက်ရှိ အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လို့ အလေးအနက်ပြောသွားပါတယ်။
ဒေါ်စုက ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာအာဘဲနဲ့ တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Nay Phone Latt - Articles
ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃
ဒီနှစ် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ပါ။ အိပ်ရာကနိုးနိုးချင်း Facebook ကိုဖွင့်တော့ TIME မဂ္ဂဇင်းက ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အန်တီနဲ့ လေဒီဂါဂါတို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲကို ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ ... အားပေးကြသူတွေ၊ ပရိတ်သတ်တွေက အပြိုင်အဆိုင် နွှဲနေတာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ရဲ့ ဆန်းသစ်သော အမှတ်လက္ခဏာတွေများစွာထဲက တစ်ခုပါ။ ဒီလိုမျိုး အွန်လိုင်းကနေ မဲပေးရတဲ့စနစ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲမှာ မြန်မာအလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာဝင်ပြိုင်တုန်းကလည်း ကျနော်တို့ကြုံခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အဲဒီ့တုန်းကဆို မြန်မာအလှမယ်ဟာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ မြန်မာတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ Miss Internet 2012 ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့အထိ နန်းခင်ဇေယျာရော သူ့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေပါ အောင်မြင်မှုရခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လဲ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ အခုလဲ ထူးခြားတဲ့ နောက်ထပ် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုက ကျတော်တို့ရဲ့ အွန်လိုင်းနိုင်ငံသား Netizen တွေကြားထဲမှာ ထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
TIME မဂ္ဂဇင်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နှစ်စဉ်အယောက် ၁၀၀ ရွေးလေ့ရှိတဲ့ ပွဲလေးတစ်ခုကို သူ့ထုံးစံအတိုင်းကျင်းပ လိုက်ခြင်းပါ။ အဲဒီ့မှာ ကျနော်တို့အတွက် ထူးခြားသွားတာက ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အခြား နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျော်ဖြတ်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် အနုပညာရှင် လေဒီဂါဂါနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့အခြေအနေအထိရောက်လာခြင်းပါပဲ။ ကျနော်အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်းက မဲပေးရွေးချယ်ပွဲနှစ်ခုစလုံးရဲ့ မဲပေးရွေးချယ်ရတဲ့စနစ် တွေကိုကြည့်တဲ့အခါ စက်တစ်လုံးတည်းကနေ အကြိမ်ကြိမ်မဲပေးခွင့်ပြုထား တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့အခွင့်အရေးကို မိမိရရအသုံးချပြီး မြန်မာအလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာကို မြန်မာတော်တော်များများဟာ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်အရင်းခံပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကနေ အကြိမ်ကြိမ်မဲပေးခဲ့ကြပြီး နန်းခင်ဇေယျာလည်း Miss Internet 2012 ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့လို တစ်ယောက်တည်းက အကြိမ်ကြိမ် မဲပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူး၊ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတယ် မညီဘူး စသည်ဖြင့် အငြင်းပွားမှုတွေလဲ အွန်လိုင်းနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာ အမြောက်အများပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းက အကြိမ်ကြိမ်မဲ ပေးတာကို မတရားလုပ်တယ်လို့ခံစားပြီး ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေရှိသလိုပဲ ... မဲဝင်မပေးရင်ပဲ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်မရှိတဲ့သူ၊ မြန်မာမပီသတဲ့သူစသည်ဖြင့် စွပ်စွဲပြောဆိုချင်ကြတဲ့ သူတွေလဲတွေ့ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လေဒီဂါဂါတို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုက ပိုပြီးပြင်းထန်ပါတယ် ... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Miss Myanmar တုန်းကလို နိုင်ငံတွေအများကြီးထဲက ကိုယ့်နိုင်ငံသူကို မဲပေးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ... နှစ်ယောက်ယှဉ်ပြီးမဲပေးရတာမို့ပါ။ TIME မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာကလည်း ယှဉ်ပြိုင်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် % တွေကို အချိန်မှန် တင်ပေးနေပါသေးတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူကို အနိုင်ရစေချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ... ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းဘောင်ထဲကနေ ကိုယ်နှစ်သက်သလို မဲပေးကြတာဟာ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်အသုံးချတာဖြစ်လို့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ အခြားသူတွေ စိတ်မဝင်စားလို့ အဲဒီ့ပွဲကို ဝင်မနွှဲကြတာကလည်း သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပါပဲ။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုယ်လုပ်နေကြတဲ့အပေါ် ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူးဆိုရင် ... ကျနော်တို့ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ မအိပ်မနေမဲပေးနေကြတဲ့သူတွေကို အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ အားနေကြတယ်လို့ အပြစ်တင်တာ၊ မဲမပေးတဲ့သူတွေကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်မရှိသူတွေလို့ စွပ်စွဲတာ စတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ... သူတစ်ပါးရဲ့ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်စော်ကားတာပါပဲ။ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်ရအောင်ယူတာ အသုံးချတာမျိုးတွေကို အားပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့် သူတစ်ပါးရဲ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တာ စော်ကားတာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ ရှုံ့ချရပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ကိစ္စမှာ နောက်ထပ်တစ်ခုတွေ့မိတဲ့ ထူးခြားမှုကတော့ ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လေဒီဂါဂါကို ယှဉ်ရွေးခိုင်းတဲ့အတွက် ... အချို့သောသူတွေဟာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရွေးရုံနဲ့မပြီးပဲ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့သူကို ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့ အသုံးအနှုံးမျိုးတွေသုံး လာကြတာပါ။ အန်တီ့ကိုချစ်တယ် ... နိုင်စေချင်တယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်း ကြိုက်သလောက် vote လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်တီနဲ့ လေဒီဂါဂါနဲ့ကို ယှဉ်ပြောပြီး လေဒီဂါဂါကို အပုတ်ချတာမျိုးတွေ လုပ်လာတာဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ။ ဘယ်သူမှတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ကမ္ဘာမကျော်ပါဘူး။ နောက်ပြီး အန်တီက နိုင်ငံရေးသမားပါ လေဒီဂါဂါက အနုပညာသမားပါ။ အလေးချိန် weight နဲ့ အလျား length ဆိုတာကို တိုင်းတာတဲ့အခါ ယူနစ်မတူတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ အများပြည်သူကို လွှမ်းမိုးတယ်လို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာရှိပါသေးတယ် ... လေဒီဂါဂါဟာ နိုင်ငံရေးအရ၊ ပညာအရည်အချင်းအရ၊ အတွေ့အကြုံအရ၊ အတွေးအခေါ်အရ စသည်ဖြင့် အန်တီ့ကို မမီနိုင်တာတွေများစွာရှိနိုင်ပေမယ့် ... အနုပညာအရတော့ သူ့မှာလဲ လျှော့တွက်မရတဲ့အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ် ...။ အနုပညာအတွက် အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း(Creativity) နဲ့စိတ်ခံစားမှုစွမ်းရည်တွေမှာလည်း လေဒီဂါဂါဟာ ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းအစတွေရှိပါတယ်။ ကျနော် ဒီလိုပြောနေခြင်းဟာ အန်တီနဲ့ လေဒီဂါဂါ နှစ်ယောက်ထဲက ဘယ်သူ့ဘက်မှလိုက်ပြီး မဲဆွယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက ... ကိုယ့်ဘက်က အနိုင်ရစေဖို့ အခြားတစ်ဘက်ကို ခြေထိုးတာ၊ အပုတ်ချတာစတဲ့ မတရားသော ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုးတွေ လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုတာပါ။ Fair Play ဆိုတာရှိပါတယ်။ တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေဖြစ်ဖို့ ... နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုအပြင် ပြိုင်ဘက်အပေါ်လေးစားအသိအမှတ်ပြုမှုတစ်ခုလဲရှိဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။
တစ်ဘက်ကိုတစ်ဘက် အပြီးသတ်ချေမှုန်းပြီးမှ အနိုင်ရတဲ့ စစ်ဘီလူးတို့ရဲ့တိုက်ပွဲမျိုးတွေ ကျနော်တို့ကမ္ဘာမှာ ဆက်လက်မရှင် သန်သင့်တော့ပါဘူး။ အဲဒီ့လို ကိုယ်နိုင် သူရှုံး၊ သူနိုင် ကိုယ်ရှုံးစတဲ့ တိုက်ပွဲမျိုးတွေဟာ လူသားကမ္ဘာကို အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။ ညစ်လုံး၊ တိုက်လုံးတွေ မသုံးပဲ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် အပြန်အလှန်လေးစားမှုတစ်ခုနဲ့ တရားမျှတစွာရှင်ပြိုင်သော ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ သန့်စင်မှုဟာ လူသားကမ္ဘာကိုပိုပြီးလှပစေမှာပါ။ ကိုယ့်အခွင့်အရေး သူ့အခွင့်အရေးကို အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုလေးစားသော၊ မိမိရဲ့ရှင်သန်မှု၊ မိမိရဲ့အနိုင်ရလိုမှုအတွက် သူတစ်ပါးကို ခြေထိုးညစ်ပတ်ခြင်း အလျဉ်းကင်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကို ကျနော်တို့ တစ်ယောက်ခြင်းစီက လိုလားတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ကို ကျနော်တို့ အသေအချာကိုရောက်ကြပါလိ့မ်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို ကျနော်တို့ကပဲ ဖျက်ဆီးနိုင်သလို ... ယဉ်ကျေးမှုအသစ်တစ်ခုကို ကျနော်တို့ကပဲ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။